Xujaajta oo ku qulquleysa Mina si ay iskugu diyaariyaan tiirka ugu weyn Xajka ee Carafa - Horn Future
Xujaajta oo ku qulquleysa Mina si ay iskugu diyaariyaan tiirka ugu weyn Xajka ee Carafa
Makka-(Horn Future)- Xujaajta ayaa waxa ay bilaabeen qulqulka Mina si ay isku gu diyaariyaan inay u dhaqaaqaan bari oo Khamiis ah si ay u joogsadaan Buurta Carafa si ay ugu gutaan tiirka ugu weyn ee Xajka.
Waxa martida Raxmaanku ay tagi doonaan Mina oo 7 kilo mitir waqooyi-bari ka xigta masjidka weyn ee xaramka Makka si ay u gutaan maalinta(Tarwiyadda) iyaka raacaya Sunnihii Rasuulka Eebe,Nabadgalyo iyo Naxariisi korkiisa ha ahaatee,ka hor inta aynan u dhaqaaqin maalinta ku xigta ee (sagaalaadka bisha Dul-Xaj) si ay u joogsadaan Buurta Carafa oo iyadu ah rukunka ugu weyn ee Xajka.
Waxa loo baahan yahay in loo dhaqaaqo Mina ka hor inta aynan cedceedu soo rogman’,si Xujaajtu ay ugu tukadaan salaadaha Duhurka,Casarka, Maqribka, Cishaha iyo Subaxa,iyada oo lasoo gaabinaya salaadaha afarta ah laakiinse aanan marka kaliya la tukanaynin.
Sida Sunnaha ah Xujaajtu waxa ay baryi doonaan ama ku hooyaan doonaan Mina maalinta Tarwiyada , ka dibna waxa ay u dhaqaaqi xaggaa iyo Buurta Carafa kadib marka uu waagu dilaaco maalinta sagaalaadka ee bisha Dul-Xaj.
Maalinta Sagaalaadka ee Xujaajtu ay joogaan Buurta Carafa oo ah rukunka ugu weyn Xajka gudashadiisa ayaa waxa uu amray Nabigu(SCW) in ay soomaan Muslimiinta inteeda kale ee aanan maalintaa ku sugnayn buura Carafa maalintaas oo aad u fadli badan taasoo ku beegan bari Khamiista.
Tirada Xujaajta Muslimiinta ah ee kala timiday dunida oo dhan ayaa waxa lagu qiyaasay ku dhawaad 2 malyuun oo Xujaaj ah sida lagu sheegay tirakoob lasoo saaray sanadkan.
« Chocolate ka madow oo lagu daro saliid saytuunka waxa uu ka hortagaa cudurada wadnaha	» Kuuriyada Waqooyi:Tijaabadii gantaalku waa talaabadii u horaysay ee hawlgalka dagaalka Pacific ga